Somali News 06.14.21 | KWIT
Wicitaankii ugu horreeyay ee 911 wuxuu yimid Xafiiska Sheriff County Plymouth qiyaastii seddexdii subaxnimo, ka dib markii darawal uu sheegay inay wax ku dhufteen wadada.
Shabakadda Neighborhood waxay ku qabatay dhacdooyin wacyigalin ah saddexda barkadood ee magaalada Sioux habeenkii Isniinta. Qoysasku waxay u riyaaqeen dabaasha bilaashka ah, cuntada, waxayna ku milmeen xubno ka tirsan Waaxda Booliska Magaalada Sioux. Munaasabadan ayaa sida caadiga ah lagu qabtaa bisha Janaayo Xarunta Lines Long Center laakiin dib ayaa loo dhigay oo dib ayaa loogu qiyaasay COVID.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay inaysan jirin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafay iyo 110 xaaladood oo cusub.
Heerka waxtarka leh ee 14-ka maalmood waa 1.9%, oo la mid ah sidii ay ahayd maalintii hore. Heerka wanaagsan ee toddobada maalmood ah wuxuu ka kacay 1.9% ilaa 2.2%. Degmada Woodbury, waxaa jiray darsin kiisas cusub ah oo ladilay hal usbuuc sida ku cad bogga internetka ee coronavirus.
Kuwa ka soo horjeedda dhuumaha Keystone XL waxay waydiisanayaan maamulayaasha gobolka Nebraska inay ka noqdaan dhulkii loo sahlay ee shirkada la siiyay dhul gaar loo leeyahay hada mashruucii si rasmi ah ayaa looga takhalustay. Qareenada Bold Nebraska iyo Ponca Tribe ee Nebraska ayaa codsigan ku sameeyay warqad ay u direen Komishanka Adeegga Dadweynaha ee Nebraska, kaas oo ku ansixiyay marinka la soo jeediyay dhuumaha ee 2017.
Somali News 06.11.21
By Person: Ifrah Mosman • Jun 11, 2021
Booliska Magaalada Sioux ayaa dhammeystirey dib u eegista dhacdo "adeegsi xoog ah" oo ka dhacday magaalada Perkins bishii Abriil 29 waxayna ogaadeen in saraakiishii ku lugta lahaa ay ku dhex dhaqmeen siyaasadaha waaxda.
Muuqaal Video ah oo ku dhex wareegayay Facebook ayaa muujinayay loolan u dhexeeya saraakiisha iyo nin Madoow ah intii la xirayay.
Baarayaasha ayaa sheegaya in ninkan laga codsaday inuu ka baxo maqaayada uuna diiday uuna ka hor yimid in la xiro. Mar uun, ayaa ninku lagu riixay waab uu la socdo sarkaal ku haysta taser isaga.